Meleteriga Dowlada iyo Al-shabaab oo dagaal khasaare geystay ku dhexmaray deegaanka Ow-diinle – Radio Daljir
Luulyo 18, 2013 3:00 b 0
Ow-diinle, July 18- 2013 – Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa kooxda al-shabaab ayaa? xalayto dagaal culus ku dhexmaray deegaano ka tirsan gobolka Baay, dagaalkaas oo dhaliyey khasaare badan oo dhinacyadii diriray ah.
Kooxda al-shabaab ayaa goor fiidkii xalayto ah dagaal ku qaaday saldhigyo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Owdiinle ee gobolka Baay, waxaana dagaalkaasi oo mudo socday kadib saxaafada la hadlay dhinacyadii dagaalamay.
Maxamed Sheikh Cabdulaahi oo ah gudoomiyaha Ow-diinle oo war-baahinta gudaha la hadlay wuxuu sheegay in weerar lagu soo qaaday, kadibna halkaas uu dagaal khasaare geystay ka dhashay, Maxamed Shiekh wuxuu sheegay in ay dileen labba ka tirsan al-shabaab, iyadoo uu jiro khasaare dhaawac oo kale oo soo gaaray.
Docda kale Afhayeen aan magaciisa la shaacin oo u hadlay kooxda Al-shabaab ayaa isna daaha ka qaaday in ay dagaalkas ku dileen Askar kala gedisan, balse ma uusan shaacin tiro rasmi ah, dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalku ahaa mid culus.
Ilo madax banaan oo ku sugan gudaha Ow-diinle oo aan la xiriirnay waxay sheegeen in khasaaruhu yahay mid ka badan inta ay sheegeen labbada dhinac, waxaa lagu sheegay tirada dhimashada ilaa 3 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah iyo dhaawaca 10 kale.